रुसले बल्ल सार्वजनिक गर्यो युक्रेनमा हताहतीको संख्या, कति मारिए ? — Sanchar Kendra
रुसले बल्ल सार्वजनिक गर्यो युक्रेनमा हताहतीको संख्या, कति मारिए ?
काठमाडौं । रुसले युक्रेनमा जारी आक्रमणमा आफ्नो तर्फ भएको सैनिक हताहतीको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । रुसी सैनिक निकायका उपप्रमुख कर्णेल जनरल सेर्गेई रुद्स्कोईले युक्रेनमा १३०० भन्दा धेरै रुसी सैनिक मारिएको जनाएका हुन् ।
उनका अनुसार युक्रेनमा १३५१ रुसी सैनिक मारिएका छन् । त्यस्तै, रुसी आक्रमणमा युक्रेनी सेनातर्फ १४ हजार जनाको मृत्यु भएको उनको दाबी छ । त्यसैगरी, रुसी आक्रमणका क्रममा हालसम्म ३ हजार ८ सय २५ जना घाइते भएको उनले बताए । युक्रेनमा मारिएका सैनिकका परिवारलाई राज्यले सहयोग गर्ने समेत आश्वासन दिए ।
यसअघि युक्रेनले एक महिनायता जारी आक्रमणका क्रममा १६ हजार रुसी सैनिक मारिएको दाबी गरेको थियो । युक्रेनमा हालसम्म आधा दर्जनजति वरिष्ठ रुसी सैनिक अधिकारी समेत मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
यस्तै युक्रेनका राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पश्चिमी देशको सरकारसँग युक्रेनको मद्दतका लागि लडाकू विमान, ट्याङ्क र मिसाइल डिफेन्स सिस्टम दिन एकपटक पुनः अपिल गरेका छन् ।
अबेर राती एक भिडियो सन्देशमा उनले युरोपको सुरक्षाका लागि जुन हतियार बनाइएका छन् त्यो गोदाममा धुलो खाएर बसिरहेको बताएका छन् । जेलेन्स्कीले मसिन गनले आफूहरूले रुसी लडाकू विमान खसाल्न नसक्ने पनि दुखेसो पोखे ।
उनले भने, ‘हाम्रा सहयोगीसँग हतियार छ र त्यो गोदाममा थन्किएका छन् । यो युक्रेनको स्वतन्त्रताको मात्रै कुरा होइन, यो पूरा युरोपको स्वतन्त्रताको कुरा हो ।’
उनले युक्रेनले नेटोको एक प्रतिशत मात्रै लडाकू विमान र एक प्रतिशत ट्याङ्क चाहिएको बताउँदै आफूलाई योभन्दा बढी नचाहेको पनि जिकिर गरे । उनले नेटो सदस्यलाई प्रश्न सोध्दै भने, ‘के तपाईँहरू रुसको धम्कीले डराउनुभएको छ ?’
जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई रुसको कब्जामा लिएको खण्डमा रुसले युरोपको भूभागमा आफ्नो कब्जा थप बिस्तार गर्ने बताएको छ । यस्तै, युक्रेनको भ्रमणमा गएका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनी सरकारका मन्त्रीसँग भेटघाट गरेका छन् । रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि युक्रेनी नेतासँग यो उनको पहिलो भेटघाट हो ।
युक्रेनका विदेश मन्त्री दमित्रो कुलेबाले उनले अन्य देशबाट हतियारको मद्दत पाइरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘हतियारको मामिलामा युक्रेनले अमेरिकाबाट जति मद्दत पाएको छ त्यो अन्य कुनै पनि देशबाट पाइएको छैन ।
यो निकै महत्त्वपूर्ण छ । यो युक्रेनी जनताको जोस हो र पश्चिमी देश, विशेष गरी अमेरिकाले दिएको हतियारको शक्ति जो जसले हामीलाई युद्धको मैदानमा सफल बनाउनेछ । हामीले अमेरिकाबाट थप हतियारको आश्वासन पाएका छौँ ।’